Torohevitra ho an'ireo matihanina - Fampiofanana kognitive
Ianao izao: Home » Torohevitra ho an'ireo matihanina
Amin'ity pejy ity dia azo atao ny mangataka fakan-kevitra amin'ny matihanina TrainingCognitive momba ny tranga ara-pahasalamana na ny fitsapana horaisina amin'ny fanombanana. Miangavy anao izahay mba hameno ilay takelaka mifatotra amin'ny alàlan'ny fisafidianana ilay matihanina tadiavinao toro-hevitra ary mialoha mialoha ny lohahevitry ny fangatahana. Hifanerasera aminao amin'ny fahafatsinay isan-ora amin'ny fivoriana amin'ny alàlan'ny Skype na Zoom. Ny saran-kevitry ny consultation dia 50 € / ora. Ny vola kely indrindra, mandritra ny adiny iray dia 50 €.
Professional hifandraisana *
Dr. Anemone - Neuropsychologist (fanombanana ny neuropsychological ho an'ny ASD ahiahiana sy / na ADHD amin'ny vanim-potoana fampandrosoana sy olon-dehibe, fitsaboana neuropsycholojika ho an'ny ASD sy / na ADHD ary / na tsy fahampian'ny kognita amin'ny firaisana)
Dr. Donadio - Mpitsabo miteny (fanombanana sy fitsaboana ny aretina amin'ny fiteny sy ny fianarana)
Dr. Enrica Marrocco - Neuropsychologist (fanaraha-maso ny fanombanana sy ny fandaminana ny fitsabahana kognitika sy psycho-social amin'ny fahanterana ara-pahasalamana sy ara-pahasalamana)
Famaritana fohifohy momba ny lohahevitry ny consultation *